Uncategorized – Kiran Story
heart vacancy 1.01
she flirts me again…
January second week,
I was in the premise of Sanima Bank,when I first glare her. Big eyes, pale face … so beautiful girl…I was just seeking her that my eyebrows barely blink.
she seems anger but actually she wasn’t !!
That was my first bank account from first income.
So, I was just opposite of her, she provided meaform to fill up. I asked every question because to keep conversation alive as well as to listen melodious words…
I thought she was boredom on the talk, but she kept her laugh n laugh…smile …
and at last, I was standing in front of her,seems looking to the form,but stole her face,beautiful face…
She found the truth and flirts me “Kiranji,any question ??”
hand writings of Kiran
March 3, 2016 February 27, 2017 Leaveacomment
“तिमी भकभके हौ ?”
उसले सिधै म्यासेज पठाई।
तर म भकभके थिइनँ। म खासमा, केटीसँग बोल्न नजान्ने व्यक्ति थिएँ, जसलाई उसले गलत अर्थ लगाई।
केही दिनदेखि मेरो फेसबुकमा म्यासेज गर्ने शुभचिन्तक बनेकी थिई। र, शब्दमा जिस्कदाजिस्कदै हाम्रो (अव्यक्त) प्रेम आवाजसम्म पुग्न खोजेको थियो।
अनायासै मैले उसको नम्बर लगाएँ, कोरियन लवजमा बोली मोरी।
सानो तर सुरिलो स्वरकी धनीले धोद्रो र बाक्लो अनि डरमिश्रित आवाज एक झड्कामै भकभके बुझिछे।
चिनजानका साथीको माझ गफाडीको पहिचान बनाएपनि म खासमा केटीअघि म्युट नै हुँ, अथवा म बोली नभएको लाटो लाग्दछु।
ऊ अर्थात् …
काममा जाँदा मैले उसलाई अर्कोतिर उभिएर साइट हेरिरहेको देखें। म उसकै नजिकबाट गई उसको अपोजिटमा साइट हेर्न लागें। मैले उसलाई नदेखेझैं गरिदिएँ, ताकी उसलाई मप्रति घृणा जागोस्। तर मेरो ध्यान उसमै थियो। उसलाई लुकिलुकी मैले नजर दिइरहन्थें। ऊ मेरो बेवास्ताबाट रिसाएकी थिई। कामको जानकारी लिएर हिड्दाहिड्दै मैले त्यो एक घण्टा उसलाई बिर्सेछु। पछि ऊ उसका स्टाफमाझ थिई, तर घोरिएर बसेकी। कलेटी अनुहारमा, फुङ्ग उडेजस्तो।
वास्तवमा ऊ त्यस्ती गम्भीर थिइन्। अहँ, पटक्कै।
(खासमा, ऊ चञ्चले थिई र बारम्बार आफ्नो निधार हल्लाउँदै कपाल मिलाउथी, सो मलाई मन पर्थ्यो, किनकि त्यसो गर्दा ऊ असाध्यै सुन्दरी देखिन्थी।)
म उसका टोलीसँग गफिन थालें, ऊ मेरा गफप्रति बेवास्ता गरेजस्तो देखाउदै थिई, रमाइलो कुरामा पनि गम्भीर मुहार लगाएर। मैले पटकपटक उसको अनुहार चोरिरहें, एकपटक अकस्मात् पक्राउ परें, आँखा जुँधे, चश्मा निधारले हल्लाउँदै उसलाई इशाराले हाईहेल्लो गरें।
अनि बल्ल ऊ मुस्काई।
के त्यो माया थियो ??
हिजै त देखेको, भेटेको र गफ लगाएको थिएँ, मैले उसँग…
धरहरा अघिल्तिर उभिएर
सायदै धरहरालाई म जन्मेको थाहा नहोला।
या, उसलाई मैले टेकेको ज्ञात नहोला।
म धरहराप्रति सधैं आशक्त रहें।
चाहे, त्यो भीमसेन स्तम्भ होस् या नौ तले धरहरा।
जहाँबाट सिंगो काठमाडौं उपत्यका देखिन्थ्यो।
अव्यवस्थित र गरीब काठमाडौं हेर्न राजादेखि रङ्कले धरहराको बुई चढ्थे।
इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्दा,
धरहरा सधैं सिंगो, सद्दे र सेतो देखिन्थ्यो।
उसका दागहरू कहिल्यै चम्किएनन्।
नेम र फेमभित्र धरहरा सधैं उँचो रह्यो।
इतिहासका विरासत थाम्न भीमसेन स्तम्भ उर्फ धरहरालाई हम्मेहम्मे पर्दैछ।
किनकि, यो अब हाम्रा भैंसी चराउन शैलुङ पुग्ने बाजेले सय थुम्का डाँडाबाट देखिने धरहरा रहेन्।
जसलाई बादल लागेको दिन “ब्याडलक” ठान्दै हामी चुकचुकाउने गर्थ्यौं, धरहराको दर्शन नपाएर।
बैशाख १२ को त्यो विनाशकारी प्रलयवान् भुँइचालोले धरहरालाई केवल भग्नावशेषमा सीमित गरिदियो।
बिहानैको दौडले सुन्धारालाई फन्को मारेर
न तिमी देखिन्थ्यौ,
न देखिने छनक देखाउथ्यौ।
भाँचिएको आधा तलालाई आफ्नो गौरव बनाउँदै
त्यस्तो थिइनौ तिमी।
केवल तिमी धरहरा हुनुको अर्थ खोलिरहेथ्यौ।
तिमीलाई पनि थाहा रहेछ धरहरा,
त्यसैले त तिमी आफ्नो शिरच्छेदन गरेरपनि
शिरै देखाइ उभिएकी छ्यौ।
त्यै भग्नावशेषभित्र मैले सिंगो धरहरा खोजिरहें।
भीमसेन थापाका बहादुरीपूर्ण वीरता र गौरवगाथा पल्टाइरहें …
सायद, भीमसेन थापाजस्तै धरहराले पनि
त्रासद र दु:खद अन्त्यको नियति भोग्नुपर्यो।
तरैपनि, धरहरा कहिल्यै ओर्लनेछैन् आफ्नो त्यो नौ तले उचाईबाट…
अनायासै तिम्रो याद आयो र प्रिय, यी भावना कोर्न चाहें।
तिमी आयौ र गयौ,
मुटुभित्र मायाको दीप जलाएर धड्कनरुपी स्पन्दनभित्र,
हरक्षण तिम्रै नाउँ जपिरहें, भुल भयो र प्रिय
सपनाजस्तै माया देखायौ र आफैं हरायौ, के बिराएँ र प्रिय
तिम्रै प्रतिक्षामा, काटिरहें चिसा रातहरू,
भिजाएँ सिरानी, टुटाई दिल,
बोलिदेऊ न प्रिय,
मैले कुन बाटो बिराएँ ??
रेष्टुराँमा पिइने कफीले, कहाँ न्यानोपन मेटाउछ र ??
तिमी कफी बनी आयौ, म वाफमा उडिरहें
थाम्यौ हात, कसायौ आलिङ्गन,अनि छाड्यौ
म त साथ चाहन्छु जीवनभरिको,
“सो पिस” होइन प्रिय।
नजानिदो बाटोबाट प्रेम रोपिदियौ,
सारिदियौ माया, गोडमेल गरेर
हात थाम्न चाह्यौ, जलन बनाएर
प्यासी बनाई गयौ, प्यारको ज्वारभाटा चलाएर
तड्पाईदियौ अनायासै, गुलिया सपनाका पत्रले…
मैले विश्वास गरेथें तिमीलाई, माया मेरो व्यर्थै भैगो
समर्पणको कसमले, तन मन जीवन धुलोसरी उडाइदियो …
हो प्रिय, म गलत थिएँ।
मैले चोखो प्यार गरेर भूल गरें।
तिमीलाई चाहेर भूल गरें।
तिम्रो बाटो ढुकेर नराम्रो गरें।
भूल भए क्षमा गर ल प्रिय !!
February 4, 2016 February 27, 2017 Leaveacomment
ननसेन्स लभ विथ दिव्या
मलाई थाहा थियो,
ती हावाका झोक्कासरि बहेका मायाप्रेमका भावना फगत हावाजस्तै मौसमी थिए।
आज पनि मौसम मनजस्तै धुम्म रह्यो।
यो चाहीं पक्कै होइन कि, मौसमलाई मनले सञ्चालन गर्छ।
बरू हुनसक्छ, करोडौं हर्षित मनहरुमा मौसमले मेरो उदासी मन देख्यो होला, र यसैलाई क्याँस गर्न सफल रह्यो होला, सायद।
नाउँ किरण भएपनि त्यो रश्मीरूपी ज्वज्वल्यमान दीप कहिल्यै अनुभव गर्न सकिनँ। यौटा क्रेटमा रहेका तीस अण्डामध्ये कुनै यौटा चुकिदा जस्तो पिडा हुन्छ,मनमा सोही असीम दु:खले बास गरिरहे अनवरत …
(आफूलाई क्रेट र प्रेमलाई अण्डाको उपमा दिदाँ अण्डाको पो बेइज्जत गरेजस्तै लाग्यो)
धेरैलाई मैले सचेत गराएँ, उमेररुपी आकर्षणले थिचेको मायाप्रेमबाट टाढै रहन।
तर आफैलाई रोक्न भने सकिनँ।
दिव्याले सुरुमा सम्झाएकी थिई, हामी प्रेम नगरौं, राम्रो साथीमात्र बनम् भनेर।
फेरि अवचेतन मनमा कुनदिन उसले प्रेमको प्रस्ताव राखी, र मैले दार्शनिक पारामा सुकरातले हेमलक पिएझैं उसको प्रेमप्याला कहिले पिएँ ??? अनभिज्ञ छु।
साच्चिकैं म मायामा फसेथें ??
सायद, समयले त्यसको जवाफ दिनेछ।
दिव्या त्यो पर… देखिने क्षितिजलाई देखाउँदै “संसार त्यहीँसम्म हो। त्यहाँबाट अर्को संसार देखिन्छ…” भन्थी।
म भने देखिने अद्भुत क्षितिजलाई छाडेर दिव्यालाई हेरिबस्थें।
फेरि धेरैबेर सोचें,
माया, संसारको तेस्रो सत्य।
पहिलो जन्म र दोस्रो मृत्यु हो भने, माया त्यसपछि।
सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त शब्दमा तौल खोजेर माया माया भन्नु मूर्खताको चरम सीमा थियो होला।
कति रात अनिदो रहें, कैयन महत्त्वपूर्ण समयका नेटोहरू कटाइदिएँ माया माया भनेर…
अनि निष्कर्षें, म साच्चिकै भ्रममा थिएँ।
देखेथें उनलाई कतैतिर, आइन् दैलो ढकढक्याउदै,
लगाइनँ दैलो, जिन्दगीको।
सायद, त्यै मेरो सबैभन्दा ठूलो भूल थियो।
भूल्नु फूल्नु र हराउनु सायद यौटै हो, जिन्दगीमा।
शाब्दिक अर्थबाहेक यिनमा क्यै फरक भेटिनँ।
प्रत्येकका जीवनरुपी भोगाइ फरक तथा पृथक हुन्छन्।
मेरापनि धेरै भोगाइहरु आममान्छेभन्दा फरक रहे।
नितान्त व्यक्तिगत आयामहरू जिन्दगीमा ठूलो प्रेरणा पनि बन्न खोज्दारहेछन्।
ट्याँग पनि बन्दा रै’छन्।
भलै सफल असफल त आइहाल्छ।
“मानिस उमेरमा कवि,कम्युनिस्ट र प्रेमी हुन्छ” भनेर कसैले दर्शन छाटेंथे, आज आएर उक्त महानुभावलाई हृदयदेखि साधुवाद दिन मन लाग्यो।
फेरि म पृथक थिइनँ प्रेमको मामिलामा 😉
मनैदेखि ओकल्न मन लाग्यो, गुम्सिएका पिल्सिएका र उसिनिएका मनका भावहरु।
फेरि सोचें, छाडिएको र त्यागिएको व्यक्ति किन बारम्बार सम्झनामा ल्याउनु !!
यो सत्य थियो, प्रेम पिडादायी हुन्छ र भयो।
यहाँभन्दा बढि अझै आफूलाई पिरोल्न चाहन्थिनँ म।
र कोरें शब्द।
हिजो आफ्नै भन्थ्यौ, आज टाढिन रै’छ।
डियर र मायालु भन्थ्यौ, आज नचिन्न रै’छ।
प्रेमालाप गरौं भन्थ्यौ, परदेशी ठान्न रै’छ।
सम्झिरहन्छु भन्थ्यौ, आज बिर्सन रै’छ।
दिलमा छिर्न मन थियो, ढोका बन्द रै’छ।
मनैदेखि कुरिबसें, बिर्को लाग्या रै’छ।
माया लाग्यो उनको, बाटो अर्कै रै’छ।
मुटु दुख्यो मेरो, धोका खान रै’छ।
(खासमा, म मिस्टर बिनको फ्यान भएको नाताले यो कविताको शीर्षक “रै’छ” हुनुपर्थ्यो। तर अब प्रेममा फसेपछि अलिकति गम्भीर हुन जानिँदो रैछ…)
फेरि छाडिजाने निष्ठुरीको याद आयो …
सायद यो मनले गरेको चोखो एवं निश्छल माया त्यो मनमा थिएन।
फगत आकर्षणले थिचिएको जबर्जस्त सम्बन्धको अन्त्य यस्तै पिडादायी हुनुपर्थ्यो र भयो।
आफूले भोगेको त्यो मायालाई ननसेन्स लभ को संज्ञा दिन मन लाग्यो।
जे माध्यमबाट माया बसेजस्तो भएथ्यो, त्यसलाई अनस्टल गरें, अनि लामो श्वास फेरें।
बिर्सिएका खुसीलाई ओठमा सजाउनु त छदैथ्यो।
पुरानै दैनिकीमा फर्कन….
(दिव्यालाई सम्बोधन गरेर कोरिएका भावुक प्रेमपत्रको बदला उनको तिरस्काररुप शब्दवाणले घायल यो मुटुलाई यी शब्द बुनेर मल्हम लगाउन चाहें। ख्वै, म कत्तिको सफल भएँ वा मायाजस्तै असफल बनें, प्रतीक्षामा कुरिरहेछु …)
प्रस्तुत शब्दरुपी भावहरू मेरा मगजका कल्पनामात्रै हुन्।
कसैसँग मेल खान गएमा मलाई माथिल्ला दाँतका पङ्तिले तल्लो ओठलाई टोक्दै बाङ्गो हाँसो हाँस्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ।
उसैगरि, जसरी दिव्या मुस्काउथी, र म त्यो मुस्कानमा डुब्थें, हराउँथें…
आई लभ काठमाडुं …
मैले सोच्याँ थिएँ,अब मेरा कठिन दिनहरू सुरु भए।
म कसैको भरमा हिड्नुपर्ने भो…
मलाई सबैभन्दा घृणा लाग्ने ठाउँ हस्पिटललाई मेरो संसार बनाउनुपर्ने भो।अनि त्यो बैशाखीसँग मीत लगाउनुपर्ने भो।
सदाझैं आज चार बजे ब्यूँझदा मलाई अचम्म लाग्यो,ज्यान नदुखेकोमा।
घुँडा छामें, क्यै भा’छैन् जस्तै लाग्न थाल्यो।
म अझै सपनीमा त थिइनँ ??
खासमा म आज राजधानीको कुनै अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा मास्कलाई श्वास हालेर डङ्ग्रङ्ग मुढोझैं लडिरहेको हुनुपर्ने थियो।
तर मैले मेडिकल भाषाको मिराकल धेरैपल्ट पाएको छु।
र,यसपल्ट पनि भाग्य ज्वाज्वल्यमान थियो।
फेरि हिजो, मध्यान्ह
राजधानीको व्यस्त एक चोकमा मसँग यौटा दुईपाङ्ग्रे नराम्रोसँग जोरी खोज्न आइपुग्यो।
सायद शून्य दशमलव शून्य शून्य दुई सेकेन्डको नि ठूलो महत्त्व हुनेरहेछ जिन्दगीमा।
र त म उक्त मितेरी साइनोको चौबीस घण्टाभित्र जस्ताको तस्तै थिएँ।
तर त्यो मितेरी साइनोमा मेरो गल्ती थियो वा बाइकवालाको ?? मैले छुट्याउनै सकिनँ।
हुनसक्छ, मेरै गल्ती थियो।
किनकी म जेब्राक्रसबाट बाटो काटिरहेको थिएँ, र मैले हातले इशारा गरेर गति सीमित पार्न अनुरोध गरिरहेको थिएँ।
नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ मजस्ता लाखौं लाटोका आवाज, अनुरोध र आग्रह निर्ममतापूर्वक दबाइन्छ, बहिरो सरकारबाट, न्याय दिनुपर्ने ठाउँबाट।
अनि फेरि अचेलका लफंगा ठिटाहरुको फेसनरुपी हतारोको नराम्रो शिकार भएको थिएँ म।
उताबाट तीव्रगतिमा हाँकिएको त्यो रातो पल्सर २२० सीसीले मलाई चुस्स चुम्बन गर्यो,मेरो घुँडामा। मलाई नराम्ररी डर लागेछ क्यार,ज्यान भिजेछ पसिनाले।
वरपरका मनुवाहरू मेरो प्रतिक्रिया हेरिरहेका थिए,टुलुटुलु।
र म, म चुपचाप आफ्नै बाटो लागें, बौलाहाजसरी कराएर बहिरोलाई आफ्नो करोड रुपैयाँको बोली नि के सुनाउनु !!
घर पुर्‍याउन आयो चक्रपथबाट कान्तिपुर यातायात। ओर्लेर बाटो लागें लुरुलुरु।
लर्ड वायरनको जस्तो हिडाई देख्नेहरू मुस्काउथे कुटीलरुपमा। मलाई दुनियाँको बाल थिएन्। न हिजो थियो,न आज छ,न त भोलि हुनेछ यो दुनियाँको वास्ता।
छुँ मतलब !!
हु केयर्स !!
घर पुगेसी त्यो टाइट पाइन्ट बल गरेर फुकाल्दा देखें, घुँडाको पाङ्ग्रैमा रगत ओभाएको, कालो बनेको तीन इञ्चको घाउ। नभएको रगत नि बाइकवालाले चुसेछ, जुकासरी।
अनि यौटा निष्कर्षमा पुगें,
राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा अधिकांश जुकाहरुले सवारी हाँक्छन्।
बेलुका हनहनती ज्वरो आयो, बालाई सुनाउँ जस्तो लाग्याथ्यो।
जाबो बाइक इन्काउन्टर नि के सुनाउनु !! भनेर म्युट रहें।
खाना पकाउँदा र भाँडा माझ्दा त टुलको सहायता लिएँ।
भोलि सिंगै थियो।
भोलि उठ्दा उज्यालोले सूर्यको किरणसँग मितेरी गाँसेर काठमाडौं उपत्यकामा लाली छरेथ्यो,मनमोहक।
काठमाडौं आजसम्मकै सुन्दर देखिन्थ्यो।
सायद उसलाई नि डर थियो होला, मेरो चोटको।
फेरि म साविककै दैनिकीमा फर्किएँ, त्यो चमत्कारपछि पूनर्जीवन पाएर।
तर यौटा सन्देश भने दिएर गयो,
सातपल्ट लड्दा आठपल्ट उठ्नुपर्छ भनेर…
जापानी उखान सिकाएर…
आई लभ यु काठमाडौं 
मलाई माफ गरिदेऊ मेरा लोभी नजर कहिं कसैमा डुबेछ भने…
थाहै नपाई हामी यो महिनामा परिचित भयौं र एकअर्काको अभिन्न पाटोजस्तो लाग्न थालेका छौँ।
यसभन्दा अघि न मैले तिम्रो बारेमा सुनेको थिएँ न तिमीले मेरो बारेमा।
यौटा संयोगान्त हाम्रो मित्रताले नजानिदो पारामा प्रेम त कतै अंकुराइरहेको त छैन् ??
मलाई प्रेमदेखि असाध्यै डर लाग्छ।
किनकी मैले जसलाई प्रेम गर्छु माया व्यक्त गर्छु,उसले मलाई बुझ्दैन् सायद। र त्यागिदिन्छ।
हुनसक्छ, म प्रेम गर्न जान्दिनँ।
तर यसको अर्थ यो होइन कि मभित्र माया भन्ने जिनिस नै छैन्।
म अरुजस्तै आम मान्छे हुँ,जो दु:खमा रुन्छ,सुखमा रमाउँछ।
मैले धेरैसँग प्रेम गर्न चाहें, व्यक्त गरें मेरा मनका चाहनाहरू।
तर राम्रोसँग मैले अ-व्यक्त गर्न सकिनछु।
र त म हालसम्म लामो सम्बन्धबाट बिमुख छु।
मैले धेरैलाई मनमा सजाएको छु औं एवंरीतले धेरै प्रेमिकालाई एकतर्फी प्रेमबाट ब्रेकअप पनि दिएको छु।
म प्रेमलाई यौटा चुलीमा पुर्‍याउन चाहन्छु तर मेरा अघोषित प्रेमिकाहरू मबाट अनेकथरी आश गर्छन् र मबाट अकारण निराश हुँदै सम्बन्धबाट बाहिरिन्छन्।
त्यो मेरो समस्या होइन उनिहरुको हो, र यसमा मैले टाउको दुखाउन जरुरी छैन्।
अब रह्यो तिम्रो र मेरो हुनसक्ने सम्बन्ध,
हामीलाई हाम्रो थरले थिचेको छ।
जातले बाँधेको छ।
र समाजले छेकेको छ।
त्यसैले प्रिय, म यो समाजसँग विद्रोह गर्न सक्तिनँ।
बरू मिल्छ भने,आफ्नो समयको सदुपयोग गर र मलाई छाडिदेऊ।
किनकी म नारायणगोपालको यो गीत सुनेर हुर्केको हुँ
“मलाई माफ गरिदेऊ मेरा लोभी नजर कहिं कसैमा डुबेछ भने,
म त खोजीरहेछु हरेक चेहरामा,मेरी सपनाकी प्रियसी मायालु…”
हो हजुर, म लाटो !!
म लाटो हुँ,
असाध्यै लाटो !!
मलाई क्यै थाहा छैन्।
थाहा नभएरै त म लाटो हुँ।
संसार विज्ञानलाई परिक्षण गर्दै रमाउँछ।
तर म आफैंमा रमाउँछु।
थाहा छैन् मलाई
दुनियाँका उत्कृष्ट कामहरू,
उत्तम र बौद्धिक सिर्जनाहरु,
जिन्दगी हाँक्ने गौरवशाली क्षणहरू।
मलाई यति थाहा छ,
म आफ्नो नाउँ जान्दछु !!
आफ्नो उमेर,वजन र वतन जान्दछु !!
आफ्नोबाहेक अरू केही जान्दिनँ।
केही थाहा छैन् हजुर,
म लाटो हुँ।
साच्चिकै लाटो !!
म लाटो भएरै अज्ञानी छु।
अज्ञानी भएरै लाटो छु।
मेरा माइनस दुई डायोप्टरका
आँखाले निष्पट अँध्यारो,
अरू क्यै देख्दैनन्।
न त महसुस गर्छन्
क्यै जान्दिनँ म,
किनकी म लाटो हुँ।
असाध्यै अज्ञानी पनि।
मलाई न त इतिहास थाहा छ,
ती विजेताको गौरवगाथा,
हारेकाको शर्मनाक क्षण,
आँसुलाई हाँसोले जितेको,
दु:ख हारेको सुखसँग,
दानवीय गुणलाई दैविक शक्तिले परास्त गरेको (??)
इतिहास पढ्दा मलाई पिडा हुन्छ,
हारेकाको आँसुले पिरोल्छ।
म छिचोल्नै सक्दिनँ ती पानाहरू।
मसँग गुनासो गरेजस्तो लाग्छ।
त्यसैले म इतिहास जान्दिनँ।
न मलाई कोर्सिकाका बोनापार्टले
फ्रान्स र युरोप जितेको थाहा छ,
न त मभन्दा ठ्याक्कै १०४ वर्ष जेठो
जर्मन एडोल्फ हिटलरले फ्रान्सलाई निलेको,
दोस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याएको थाहा छ।
न गान्धीको शान्ति र सत्याग्रह थाहा छ,
न त बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको थाहा छ,
न मलाई बहादुर शाहको नायबी थाहा छ,
न त भीमसेन थापाको सुगौली सन्धि
र ती जोर टावरहरू (=धरहरा)
सुन्धारा थाहा छ !!
धरहरा र सुन्धारा नदेखेको+ नसुनेको मान्छे म !!.
ती १०४ वर्षे राणाकाल,
जंगबहादुर कुँवरलाई जान्दिनँ।
जान्दछु एक्काइसौं शताब्दीको सबैभन्दा रक्तपातयुक्त राजदरबार हत्याकाण्ड,
न त म गणतन्त्र बुझ्दछु
न देशलाई प्लेटमा पाउरोटी बनाएर टुक्राटुक्रा बनाएको बुझ्दछु।
न म संघीयता बुझ्दछु
न त जातियता,
म लाटो छु।
असाध्यै लाटो !!!
म दु:खमा आँसु झार्न जान्दिनँ,
न खुसीमा हाँस्न र रमाउन।
न भीडमा दौडिन र टाउको जोगाउन जान्दछु।
सेवा – धर्म – सत्कार क्यै जान्दिनँ।
“म मान्छे हुँ”
बस, यति जान्दछु।
म कालोलाई सेतो देख्दिनँ,
न सेतोलाई कालो।
म छेपारोले रङ्ग फेरेझैं
वा सर्पले काँचुली फेरेझैं
प्रशंसालाई कुटिल रुपमा नदेखेरै होला,
उनिहरू फिस्स हाँस्छन्
” ओई लाटो !!”
बोकेर मनभरी जिन्दगीका सपना,
सजाएर मीठा-गुलिया पत्रहरु,
अनि हिड्नुछ परदेश,
सिर्फ मीठो भविष्य कल्पेर,
सुखद जिन्दगानी रच्ने प्रयास गर्दै।
आलोकाँचो अनि निदरुपी आँखा मिच्दै
सबेरै भालेभन्दा अघि उठेर लाइन बस्नुछ,
परवाह छैन् परेवारूपी चराका बिस्टाँको,
न त छ भोक न प्यास न त निद्राको,
बस एकलव्यझैं जित्नुछ पासपोर्ट,
दलाल मनाएर फकाउनुछ भिसा,
उड्नुछ सबसे सस्तो उडानमा,
योग्य पार्दै,दक्ष कामदारको ट्याँग,
चर्का घाम,आगोरुपी ज्वाला,
रापरुप अक्सिजन सकिनसकी तान्दै
मीठो भविष्य कल्पेर।
सुन्दर सपना सजाएर, जिन्दगीको।